युरोपमा भेटिएका बाबुराम | Uttam Babu Shrestha
युरोपमा भेटिएका बाबुराम
जर्मनी फ्र्यांकफर्टको एक होटलमा बिहानै पुग्दा डा. बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमि आफ्ना प्लेटमा बफेट ब्रेकफास्ट हाल्दै थिए । एउटा वैज्ञानिक मिटिङमा भाग लिने सिलसिलामा म फ्र्यांकफर्टकै अर्को होटलमा पाँच दिनदेखि बसिरहेको थिएँ । आफ्ना जिल्लावासी सांसदसँग त्यस प्रकारको भेट आकस्मिक थियो । ‘तपाईं फ्र्यांकफर्ट आउनुभएको ट्वीट पढेको थिएँ । कसरी भेट्न सकिएला भएको थियो । तपाईंं आउनुभयो, राम्रो भयो,’ बाबुरामले मेरो अभिवादन फर्काउँदै भने । खैरो पाइन्टमाथि सेतो पोलो टिर्सट लगाएका उनी फ्रेस र छुट्टी मनाउन हिँडेको मुडमा देखिन्थे । गाढा रातो रङको म्याक्सी ड्रेस लगाएकी हिसिला यमिको पहिरन उनीहरूको भ्रमणलाई अनौपचारिक बनाउन पर्याप्त थियो।
‘अनि किन यहाँ आउनुभएको ?’ बाबुरामले मेरो यात्रासम्बन्धी जिज्ञासा राखे । जैविक विविधता र वातावरणीय सेवाका लागि अन्तरसरकारी संस्था (आइपिविइएस) ले तयार पार्दै गरेको विश्व स्तरीय जैविक विविधता र वातावरणीय अवस्थाको प्रतिवेदन लेख्ने सिलसिलाको एक मिटिङमा सहभागी हुन म त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यो संस्थाले सन् २०१६ मा संसारभरबाट छानेका १६ जना युवा फेलोका रूपमा म छनौट भएको थिएँ।
बाबुराम दम्पत्तीसँगै रहेका त्यस होटलका सञ्चालक जीवा लामिछाने र कुमार पन्तसँग पनि परिचय भयो । एनआरएनका उपाध्यक्ष गोरखाली पन्तसँग फेसबुकमा कुराकानी भए तापनि त्यो पहिलो प्रत्यक्ष भेटघाट थियो । ब्रेकफास्ट खाँदै पछिल्लो पटक म नेपाल जाँदा लगिदिएको युभल नोह हरारीको ‘सेपियन्स’ र ‘होमो दिअस’ पुस्तकबारे कुरा भयो । ‘यसरी नै नयाँ विचारोत्तेजक पुस्तकहरू सिफारिस गरिरहनुस् है,’ धन्यवाद शैलीमा बाबुरामले भने ।
केही घन्टामा नै उनीहरू रेलबाट जर्मनीको राजधानी बर्लिन जाने कार्यक्रम रहेछ । मलाई पनि त्यहाँको मूल ट्रेन स्टेसन (ह्फ्टवानोभ) पुगेर मिटिङस्थल ज्याकन्वर्ग प्राकृतिक संग्रहालय पुग्न मेट्रो समात्नु थियो । होटलबाट ट्रेन स्टेसनसम्म पुग्न गाडीको व्यवस्था रहेछ । गाडी चढ्नुअघि संयुक्त फोटो खिच्ने सल्लाह भयो । फोटो खिच्न हामी उभिएको स्थान बाबुरामलाई मन परेन । ‘होइन यहाँबाट त पछाडि घरबाहेक केही पनि देखिन्न, फोटोमा कुनै आइकन त हुनपर्याे । कि त हामी बसेको होटल आउनुपर्याे,’ यताउति हेर्दै उनी बोले ।
समृद्धिका लागि विभिन्न विचार, ज्ञान, सीप र क्षमताबीच मैथुन अर्थात् सेक्स हुन आवश्यक छ।
जीवाले बाबुराम दम्पतीलाई बिदाइ गरे । ‘सबैभन्दा धेरै धन्यवाद त मैले भन्नुपर्छ । बाबुरामलाई मात्रै बोलाउन खोज्नुभएको थियो । म बीचैमा आएँ,’ हिसिलाले थपिन् । ‘म्याडमलाई बोलाउनु त झन् मेरो सौभाग्य हो,’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हिसिलाको विद्यार्थी रहेका जीवाले प्रतिउत्तरमा भने । गुरुचेलाको रमाइलो ठट्टापछि हामी गाडी चढेर ट्रेन स्टेसनतिर लाग्यौँ।
‘तपाईंंको श्रीमती के गर्नुहुन्छ ?’ हिसिलाले मेरो परिवारप्रति जिज्ञासा राखिन् । ‘हामी सहपाठी हौँ, सँगै पिएचडी सकाएपछि बच्चा भयो, दुई साना बच्चाहरू छन् । हाल उनी काम गर्दिनन्,’ मैले भनेँ । ‘बच्चा हुर्काउनु, घरको काम गर्नु पनि त काम हो नि । झनै ठूलो काम,’ हिसिलाले भनिन् । बच्चा हेर्ने र घरायसी कामलाई ‘काम’ नमान्ने मेरो सोच !
म आफूलाई लैंगिक रूपमा संवेदनशील नै ठान्छु । घरको काम र बच्चाको हेरचाह गर्नमा उत्तिकै सहभागी हुन्छु।
अनुसन्धानका विषयमा हामी दम्पतीको पारस्परिक सहकार्य हुन्छ । अनुसन्धानमा महिलाहरूको कम सहभागिताबारे आवाज उठाइरहन्छु । नारीप्रति हुने भेदभावका घटनाहरूको प्रतिवाद गर्दै सोसल मिडियाहरूमा लेखिरहन्छु । मेरी छोरी कुनै छोरा भन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर मेरी श्रीमतीले गर्ने कामप्रति भने संवेदनशील हुन सकेको रहेनछु ।
आफ्नो बोलीप्रति पश्चात्ताप गर्दै मैले मेरी गृहिणी आमा सम्झिएँ । आफ्नो सिंगो जीवनलाई चुलोचौकामा सीमित पारेर संसार डुल्न सक्ने छोरो जन्माउने आमा । आफूसँगै अमेरिकामा पिएचडी सकाएकी मेरी श्रीमती जसले घरै बसेर बच्चाको स्याहार गरेको हुनाले आफू यसरी निष्फिक्री घुम्न पाएको कुरा सम्झिएँ । मलाई आफ्नो अज्ञानताप्रति दया लाग्यो । अब श्रीमतीले काम गरेको छैन भनेर कहिल्यै भन्दिनँ, मनमनै भनेँ।
हाम्रो गाडी ट्रेन स्टेसन नजिकै रोकियो । गाडीबाट ठूलो सुटकेट कुमारजीले तान्नुभयो । मैले मेरो ह्यान्डक्यारी समाएँ । बाबुराम र हिसिलाले आफ्नो आफ्नो हाते ब्याग र ह्यान्डक्यारी ताने । मेरो बुबाभन्दा जेठो मान्छेले सुटकेस तानेको हेर्दा मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो । ‘के म तपाईंंहरूलाई मद्दत गर्न सक्छु ? म तपाईंको ह्यान्डक्यारी तानिदिँऊ ?’ मैले अंग्रेजीमा सोधँे । ‘पर्दैन पर्दैन, हामी आफैँ गरिहाल्छौँ’ भन्दै बाबुराम र हिसिला आआफ्नो सुटकेस घिसार्दै अघि बढे । एक हातमा खैरो ब्याग बोक्दै अर्को हातले सुटकेस घिसार्दै गरेको यात्री बाबुरामलाई देख्दा, मैले २०४८ सालतिर गोरखामा पहिलो पटक देखेको बाबुराम सम्झिएँ । त्यतिबेला र अहिलेको बाबुराममा खासै फरक लागेन । उ बेला बाबुराम कालो झोला बोकेर त्यसैगरी हिँड्थे । बाक्लो दारी पालेका थिए, गाढा खैरो सर्ट लगाउँथे । यदाकदा खरानी रङको गलबन्दी भिर्थे । गोरखातिर उनलाई कतिले आदर्श मान्थे । कतिले बुद्घि बिग्रेर दुःख पाएको भन्थे।
‘बच्चा हुर्काउनु, घरको काम गर्नु पनि त काम हो नि । झनै ठूलो काम,’ हिसिलाले भनिन् । बच्चा हेर्ने र घरायसी कामलाई ‘काम’ नमान्ने मेरो सोच !
नेपालको पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला सांसद सामान्य यात्री बनेर जर्मनीको रेल स्टेसनमा हिँडिरहेको फोटो खिचौँ, मनले भन्यो । मोबाइल झिकेर फोटो खिच्न लागेँ । म उनीहरूले क्यामेरातिर नहेरेको बखतको स्वाभाविक फोटो खिच्न चाहन्थेँ । तर पाँचवटा फोटो खिच्दा पनि यमिले भने क्यामेरातिरै हेरेको फोटो आएछ।
उनीहरूसँग बिदावारी भएर आफ्नो मिटिङस्थल पुग्न मेट्रो चढ्दै गर्दा मनमा मिश्रित भावना आए— गरिब देश भएर त होला, हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत यहाँ कुनै महत्व छैन । पूर्वप्रम वा मन्त्रीको कुरै छाडौँ, अन्य देशका अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा सेनाका पूर्वअफिसर आउँदा नेपालमा महत्वसाथ हेरिन्छ । मिडियाले अन्तर्वार्ता गर्छन् । नेताहरू उनीहरूलाई भेट्न होटलमै धाउँछन् । तर हाम्रो देशको पूर्वप्रधानमन्त्री यो देशमा गुमनाम छन् । हामी पनि विकसित भएको भए, धनी र शक्तिशाली भइदिएको भए…।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडाउले ट्रेन स्टेसनमा सर्वसाधारणसँग हात मिलाएको, बेलायती प्रम डेविड क्यामेरुनले लन्डनको ट्युब (त्यहाँको भूमिगत रेललाई ट्युब भनिन्छ) चढेको, नेदरल्यान्डको प्रमले साइकल चढेको दृश्यहरूसँग कताकता मिल्दोजुल्दो । सायद हाम्रो देशमा त्यसरी निष्फिक्री हिँड्ने वातावरण नभएर हो कि नेताहरू विलासीजस्ता देखिने ?
उनीहरू बर्लिनमा केही दिन बिताएर रोम जाने तालिका रहेछ । इटालीको रोममा मौका मिले फेरि भेट्ने सल्लाह गर्दै हामी छुट्टियौँ । मोबाइलमा खिचेका फोटो हेर्दै म मिटिङस्थल पुगेँ । जाकेन्वर्ग संग्रहालयको वाइफाइले इन्टरनेटको ढोका खोलिदियो । छुट्टिएको करिब २० मिनेट नहुँदै बाबुरामले अघि खिचेको फोटोसहित ट्वीट गरिसकेका रहेछन् । मिलियनभन्दा बढी ट्वीटर फलोअर्स भएका बाबुरामको सामाजिक सन्जालमा सक्रियता प्रभावशाली रहेको प्रत्यक्ष देखेँ।
इटालीको रोममा म एकदिन अगावै पुगेको थिएँ । भोलिपल्ट एनआरएन इटालीले बाबुराम भट्टराईसँग अन्तक्र्रियाको कार्यक्रम राखेको रहेछ । हामी कार्यक्रम स्थल पुग्दा कार्यक्रम समाप्त भइसकेको थियो । ‘ल राम्रो भयो एक–दुई घन्टा बसेर गफ गरौँ तपाईंंहरू जस्ता युवा र अलि पढेलेखेका साथीहरूको गफ सुन्न म यहाँ आएको हो । ल जाऔँ, कतै बसौँ,’ उनले भने । अन्य सहभागीसँग एउटा सानो टोली छुट्टियो । इटालीमा त्यहाँको मौलिक पिज्जा खाने कार्यक्रम बनेको रहेछ।
नजिकैको इटालियन रेन्टुरेन्टको आगँनमा राखिएको कुर्सीमा हामी लहरै बस्यौँ । इटालीमा कार्यरत नेपाली पेसाकर्मीसमेत हामी दशजना ग्राहक । विश्व खाद्य तथा वन संगठन (एफएओ) हेडक्वाटरमा कार्यरत समीर कार्कीले इटालियन भाषामा लेखिएको मेनु पढ्दै खानाको वर्णन गरे । उनलाई इटालीको पिज्जाको मात्रै होइन, त्यहाँको वाइन र जैतुन (अलिव) को बारेमा राम्रो जानकारी रहेछ।
हामीले ६ वटा पिज्जा मगायौँ । साथमा एक बोतल ह्वाइट र एक बोतल रेड वाइन । हिसिला र मैले थोरै रेड वाइन लियौँ । बाबुरामले पानी । पिज्जा खाँदै बाबुरामले भने, ‘युरोपका यी देश किन समृद्ध भए, हामी किन भएनौँ ? हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन के गर्नुपर्ला भन्ने जान्न र सिक्न आएको हुँ ।’ उनले सबैलाई पालैपालो आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गरेर खल्तीबाट सानो डायरी निकालेर आफू भने टिपोट गर्नतिर लागे।
बाबुरामसँग मेरो औपचारिक भेट सन् २००८ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भएको थियो । त्यो बेला उनी अर्थमन्त्री थिए । म हार्वर्डमा रिर्सच असोसिएट । हार्वर्डको ‘गरिबीबाट समृद्धितर्फ : नेपालको आर्थिक भविष्य’ भन्ने कार्यक्रममा प्रवचन दिन उनी त्यहाँ पुगेका थिए । विश्व बैंकको मिटिङमा भाग लिन अमेरिका पुगेका बेला । उनीसँगै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली पनि । ‘तपाईंंहरू जस्ता उत्कृष्ट र देशलाई केही गरौँ भन्ने युवाहरूको छनौट गर्न र उनीहरूलाई देशको आर्थिक विकाससँग जोड्न म यहाँ आएको,’ उनले त्यो बेला भनेको कुरा याद छ । तर यसपटक आफूले युवा छनौट गर्ने भन्दा युवाको कुरा सुन्न आएको बताए । दश वर्षपछि उनलाई सुनिरहँदा उनमा समृद्धिको तिर्खा नमेटिएको पाएँ । शक्तिशाली अवस्थामा होस् या शक्तिविहीन अहिलेको जस्तो अवस्थामा।
आफ्नो विषयगत दक्षता, अनुभव, अध्ययनको आधारमा सहभागीहरूले नेपाल गरिब हुनुका कारण राखे, समृद्घिको मार्गचित्र प्रस्तुत गरे । समीरले नेपालमा बिस्तारै सकारात्मक परिवर्तन हुँदैछ भन्ने तर्क गरे । ‘हामीले केही वर्षअघिसम्म विकसित देशमा मात्र देख्ने एभोकाडो हाल नेपालले बंगलादेश निर्यात गरिरहेकोे छ,’ उनले भने । समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने कुरा उठ्यो । तर नेपालमा कृषि क्षेत्रतर्फ मान्छेको घट्दो आकर्षण छ, मानिसहरू कृषिबाट विस्थापित हुँदै छन्,’ एक सहभागीले भने । बाबुरामले त्यसमा तुरुन्तै असहमति जनाउँदै भने, ‘कृषि त छाड्दै जानैपर्छ । धेरै मान्छेले कृषि नछोडी समृद्धि सम्भव छैन ।’ उनले विकसित देशमा २÷३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै कृषिमा आश्रित भएकोदेखि गाउँघरमा परम्परागत कृषि छोडेर जागीर वा अन्य पेसा अपनाउनेहरू चाँडै समृद्ध भएको उदाहरण पेस गरे।
मेरो पालो आयो । २६ सय वर्षयता नेपालमा बुद्धपछि कुनै पनि मौलिक विचारक जन्मन सकेका छैनन् । मौलिक विचार राख्ने र पुरानामा खोट पत्ता लगाएर नवप्रर्वतन गर्न खोज्नेहरूलाई हुर्काउन र संरक्षण गर्न हामी पूर्णतः असफल भएका छौँ । नयाँ मौलिक ज्ञान उत्पादन नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । जातपातको अनुक्रमले पनि समृद्धिलाई रोक्यो । समृद्धिका लागि समाजमा विद्यमान विभिन्न विचार, ज्ञान, सीप र क्षमताबीच मैथुन अर्थात् सेक्स हुन आवश्यक छ । जसरी जीव विज्ञानमा फरक गुणबीचको मैथुनले उच्च गुणस्तरको जीन वा वंशको उत्पादन गर्छ त्यसरी नै मानवजातिको प्रगतिमा भिन्न विचारबीचको मैथुनले उच्चस्तरको ज्ञान उत्पादन गर्छ र त्यो ज्ञानले समाजलाई समृद्ध बनाउन मद्दत गर्छ।
जातीय प्रणालीले उत्पादन गर्ने किसानलाई शुद्र, उत्पादित वस्तु बेच्ने व्यापारीलाई वैश्य, उत्पादन प्रणालीको नियमन गर्ने–सुरक्षा दिनेलाई क्षत्री र ती सबैको अनुसन्धान गरेर सिद्धान्त लेख्ने पण्डितलाई ब्राह्मण बनाइदियो । ती समूहबीच छुवाछूतको पर्खाल बनाइदिएर फरक विचार र ज्ञानको अन्तर्घुलन हुन पाएन । हाम्रो अविकासको एक कारण जातपात रहेको मेरो तर्कमा बाबुराम सहमत भए।
युरोप, अमेरिकामा १८–१९ औँ शताब्दीका ठूला अन्वेषक, नवप्रवर्तक, वैज्ञानिकहरू नेपालमा तथाकथित तल्ला जातिले गर्ने भनिएका काम गर्ने समूहका मानिस थिए । धातुका काम गर्ने, रसायन घोल्ने, घन ठोक्ने । पहिलो पटक प्लेन उडाउने अमेरिकी राइट दाजुभाइ साइकल बनाउँथे । प्लास्टिकको आविष्कारक अलेक्जेन्डर पाक्र्स चरेसको ताला बनाउने काम गर्थे भने वाष्प इन्जिनका आविष्कारकमध्येका एक थोमस न्युकोमन फलाम पिट्थे । कल्पना गरौँ, साइकल बनाउनेलाई तल्लो स्तरको भनेर हेला गरिएको भए, फलाम ठोक्नेलाई कामी भन्दै राज्यले छोइछिटो गरेर उनीहरूमा हिनताबोध भरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? सायद न त राइट दाजुभाइले प्लेन उडाउने सपना देख्न सक्थे, न त औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्ने वाष्प इन्जिन बन्न सक्थ्यो । काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सोही समयमा उच्च स्तरमा पुगेको कला, संस्कृति, आर्किटेक्टर, धातु प्रविधिजस्ता विधाहरूले मौलिक आविष्कारक, वैज्ञानिक, इन्जिनियर, नवप्रर्वतक जन्माउन नसक्नुमा जातपातको पनि रोल छ कि ?
बहससँगै पिज्जा सकिँदै गयो । अन्तिममा एउटा टुक्रा (लोफ) पिज्जा बाँकी भयो । आफू अघाएको भन्दै सबैले एक अर्कालाई त्यो बाँकी टुक्रा खान अनुरोध गर्दै थिए । कोही तयार नभएपछि खाना फाल्न हुँदैन भन्दै टेबलमा बसेका सबैभन्दा पाका ६५ वर्षीय व्यक्तिले पिज्जा हातमा लिएर कपाकप खान लागे । ती व्यक्ति अर्थात् बाबुराम । पूर्वप्रधानमन्त्रीको त्यो तहको विनयशीलता साँच्चै लोभलाग्दो थियो।
बाबुरामलाई यसपालि युरोपमा भेट्दा ससाना कुराहरू ध्यान दिने, सहज व्यक्तिका रूपमा पाएँ । अन्तमा प्रश्न सोध्ने पालो मेरो थियो । ‘तपाईं प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, हामीलाई भन्दा बढी तपाईंलाई थाह छ, भनिदिनुस् नेपाल किन समृद्ध बन्न सकेन ? तपाईंहरूले देश किन समृद्ध बनाउन सक्नुभएन ?’
‘कुराहरू मोटामोटी रूपमा अघि भनिएजस्तै हो’ भनेर उनले आफूले लेखिरहेका समृद्धि केन्द्रित लेख पढ्न सुझाए।
← नयाँ पुस्तक भन्छ: मानिस झूटको पुलिन्दा हो
विमानस्थल र वातावरण →